यसरी ल्याउनुस् बच्चाको खाने बानीमा सुधार - पेरेन्टिङ - नारी
यसरी ल्याउनुस् बच्चाको खाने बानीमा सुधार
के तपाईंको बच्चा खाने मामलामा किचकिच गर्छ ? खानै नमान्नाले पोषणमा कमी आई स्वास्थ्यमा असर पो परिरहेको छ कि ! चिन्ता नमान्नुन्, बच्चाको खाना खाने बानीमा सुधार ल्याउन अक्षरा स्कुलकी संस्थापक प्रिन्सिपल अञ्जु भट्टराईले केही सुझाव दिनु भएको छ । यसलाई पालना गर्नुस्, बच्चाको बानीमा सुधार आउने छ ।
उनको सुझाव यस्तो छ :
बच्चालाई खाना खुवाउनका लागि हातमाप्लेट लिएर घण्टौं पच्छ्याउनु पर्दा धेरै अभिभावक हैरान हुनु भएको छ । नखाँदा बच्चामा विभिन्न स्वास्थ्य एवम् शारीरिक समस्या पनि हुने गरेको छ । निश्चय नै तपाईंको प्रथामिकतामा बच्चाको पोषण र स्वास्थ्य हो । जुन उसको आहारसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले बच्चालाई खाना खाने बानीमा सुधार गराउने केही उपाय छन् । ती यसप्रकार छन् ः
बच्चाहरूमा स्वस्थ खाने बानीको विकास गर्न रंग सहयोगी बन्न सक्छ ।हप्ताको प्रत्येक दिन इन्द्रेणी रंगका रंगीबिरंगी पकवान तयार पार्नुहोस् ।प्रत्येक दिन फरक–फरक रंगका खानेकुरा देख्दा बच्चाको दिमाग मोडिन सक्छ र उसको खानाप्रतिको रुचि बढ्दै जान्छ । साथै, बच्चाको प्लेटलाई आकर्षक बनाउन केही प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै प्लेटमा सानो र पातलो रोटी राख्नुहोस्, त्यसलाई बिभिन्न सेप दिएर कटिङ गर्नुहोस् र बच्चाले चाहेको आकारमा ढाल्नुहोस् ।
खाना मूल्यावान भएको महसुस गराउनुहोस्
बच्चाहरूमा राम्रो खाना बानी विकास गर्न उनीहरूले खानाको मूल्य थाहा पाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै भेराइटी बच्चाको अगाडि एकैपटक नटक्रयाउनुहोस् । यसो गर्दा बच्चाले खाना फाल्छ । उसलाई खानाको कुनै महत्व हँुदैन् र उसमा दुबिधा बढेर जान्छ । अब के गर्ने त ?एकपटकमा एउटा मात्र खाना त्यो पनि कम मात्रामा बच्चालाई दिनुहोस् । ता कि ऊत्यो खाना सकेर फेरि थप्न इच्छुक देखियोस् । बच्चालाई उसको खाना पूर्ण रुपमा समाप्त गर्ने मौका दिनुहोस् । एकपटकमा एउटा मात्रै बिकल्प दिनुहोस्, तब उसले बुझ्छ खाना कति मूल्यवान छ ।
खाना पस्किँदा समानान्तर पकवानमा ध्यान दिनुहोस्
यो महत्वपूर्ण छ कि बच्चालाई उही चीजहरू दिनुपर्छ जुन घरका अन्य सदस्यहरूले खाइरहेका छन् ।उसलाई मात्र फरक चिज दिंदा बच्चाले आफू बिभेदमा परेको अनुभूत गर्छ ।घरका अन्य सदस्यको प्लेटमा जस्तो खाना छ बच्चालाई पनि यसैगरी खाना सर्भ गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बच्चाले घरका अभिभवाकरुको अनुकरण गरेर टेबल म्यानर सिक्ने मौका पाउँछ । हुनसक्छ केही दिन उ डायनिङ टेबलमा चकचक गर्छ तर बिस्तारै आफ्ना गल्तीहरु सच्याउँदै सफा राख्न र सही तरिकाले टेबल म्यानर फलो गर्न उसलाई प्रोहोत्साहन मिल्छ ।
आफैंले खाने बानीमा जोड दिनुहोस्
बच्चालाई आफैं खाना खाने बानी बसाल्नुहोस् । बिशेषज्ञहरुका अनुसार पन्ध्र महिनाको बच्चाले खानाको अर्थ बुझ्न थाल्छ । बढ्दो उमेरसंगै बच्चा आफैंले खानुपर्दछ । बच्चाको खाना गाँजर, पापड आदिबाट सुरू गर्नुहोस् । त्यस पछि चम्चाको साथ दाल, भात खाने बानीको विकास गराउनुहोस् । बिस्तारै ऊ आफैंले खान थाल्छ र त्यसमा रमाउँछ पनि ।
सबै किसिमका खाना आवश्यक
जब बच्चाले ठोस खाना खान सुरू गर्दछ, दाल या त्यसबाट बनेका परिकार तथा सूजी जस्ता विकल्पहरू राम्रो हुन्छ । कहिलेकाहीं आमाहरू लामो समयसम्म पनि बच्चालाई आफ्नै हातले सुवाइदिने काम गर्छन्, जुन सही होइन । चौध वा पन्ध्र महिनाको उमेरदेखिबच्चाहरुको स्वाद लिने क्षमता सक्रिय हुन्छ । चिसो, तातो, अमिलो, गुलियो सबै स्वाद महसुस गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा, सुरुदेखि नै सबैथोक खाने बानी विकास गराउनु आवश्यक छ । बच्चाहरू बारम्बार उहीं परिकार खाँदा दिक्क हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई दैनिक स्वाद परिवर्तन गराउँदै खाना दिनु आवश्यक हुन्छ ।
बच्चालाई जबरजस्त खाना कोचाउने चलन पनि हुन्छ । यसो गर्नु गलत हो । बरु आफैंलाई केही प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, के बच्चाको खानामा पर्याप्त समय अन्तराल छ ? के खाना बच्चाले चाहेको स्वादअनुसार छ ? के बच्चाले खानाअघि खाजा खाएको त थिएन ? तपाईंको बच्चालाई शारीरिक गतिविधि कत्ति बढी चाहिएको छ ? खानाको बीचमा ३ देखि ४ घण्टासम्मको समयान्तर हुनुपर्दछ । यद्यपि बच्चाहरूलाई जंक फूडबाट टाढा राख्नुपर्दछ, तर यसमा बच्चा ज्यादै जिद्धी गरिहालेमा कहिलेकाही कम मात्रामा खाना खानुभन्दा १ घण्टा अगाडिखाजाका रुपमा दिन सकिन्छ । जंक फूडले भोक कम गर्दछ ।
बच्चाका लागि महत्वपूर्ण खानेकुरा
– अलि ठूलो भएका बच्चाहरूसंगै किचनका सामानहरू किन्नुहोस् । यसबाट तपाईंले उनीहरूको छनौट जान्ने अवसर पाउनुहुनेछ र बच्चाहरूले पनि पौष्टिक तत्वहरूको महत्व बुझ्नेछन् ।
– दुधमा कटौती आवश्यक छ । जब बच्चा खाना खान योग्य हुन्छ, उसलाई दिनको दुईपटक मात्र दूध पिलाउँदा उत्तम हुन्छ ।
– प्याकेजिङ गरिएका खाना (जुस, रोटी, चाउचाउ) आदि बच्चाहरूलाई दिनुहुँदैन । चिनीको उच्च मात्राभएका खानेकुराले बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासमा असर गर्छ ।
– बच्चाका लागि प्लास्टिकले बनेका स्कूलको टिफिन बक्स र पानीका बोतलहरू प्रयोग नगर्नुहोस् । यति मात्र होइन, खाजा बक्समा भएको रोटी वा स्यान्डविचलाई सिल्भर फोइलमा लपेट्नु हुँदैन ।यी कुराले हाम्रो स्वास्थ्यमा साइड इफेक्ट पैदा गर्छ । साथै यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउँछ ।
– खाना खाइसकेपछि, बच्चाहरूलाई चकलेट तथा आइसक्रिम जस्ता चीजहरू नदिनुहोस् । रातको खाना सुत्नुअघिको अन्तिम खुराक हो । यसले बच्चाको निद्रामा प्रत्यक्ष्य प्रभाव पार्दछ । जसले बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकास दुबैलाई असर गर्दछ । बच्चाहरूलाई रातमा यी चीजहरूबाट टाढा राख्नुहोस् ।
असार ५, २०७७ - बच्चाको घाँटीमा खानेकुरा अड्किए के गर्ने ?
जेष्ठ २६, २०७७ - यसरी घरमै बनाउनुस् अदुवाको स्वादिलो क्याण्डी
जेष्ठ ३, २०७७ - बालबालिकालाई यसरी जोगाऔं
चैत्र २३, २०७६ - धेरै खाने बानी, स्वास्थ्यलाई हानि